आज २०७६ फागुन ७ गते बुधबार, कस्तो रहनेछ तपाईको दिन ? के भन्छ तपाईको राशिफल ! – Hamrosandesh.com
आज २०७६ फागुन ७ गते बुधबार, कस्तो रहनेछ तपाईको दिन ? के भन्छ तपाईको राशिफल !
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ साथै सामान्य अपजस खेप्नु पर्ला । पारीवारिक स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनको साथ सहयोगमा कमि आउनाले सामान्य मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । भुमि तथा वाहन सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु उत्तम रहनेछ ।